Psalmen 58 HTB - Nnwom 58 ASCB
1Mo sodifoɔ, ampa ara, moka asɛm a ɛtene anaa?
Mobu atɛntenenee wɔ nnipa mu anaa?
2Dabi! Modwene ntɛnkyea wɔ mʼakomam
3Amumuyɛfoɔ fom kwan firi awoɔ mu;
wɔyɛ mmaratofoɔ firi awotwaa mu na wɔdi atorɔ.
4Wɔn ano ɛborɔ te sɛ ɔwɔ deɛ.
Ɛte sɛ ɔprammire a watɛn nʼaso,
5a ɔnte ntafowayifoɔ dwom,
na ne dwom dɛɛdɛ no mpo mfa ne ho.
6Ao Onyankopɔn, bubu ɛse a ɛgu wɔn anom,
Ao Awurade, tutu agyata no sebɔmmɔfoɔ no gu!
7Ma wɔntwa mu nkɔ sɛ nsunsuan;
8Ma wɔnyɛ sɛ nwa pɛkyɛpɛkyɛ bi a ɔretene kɔ.
Ma wɔnyɛ sɛ ɔba a ɔwu wɔ awoeɛ na ɔnhunu owia.
9Ansa na mo nkukuo bɛte nkasɛɛ ano yea,
sɛ ɛyɛ mono anaa deɛ awo no, wɔbɛpra amumuyɛfoɔ akɔ.
10Sɛ wɔtua amumuyɛfoɔ ka a, ateneneefoɔ ani bɛgye,
na wɔbɛhohoro wɔn nan ho wɔ amumuyɛfoɔ mogya mu.
11Afei nnipa bɛka sɛ, “Ampa ara, ateneneefoɔ kɔ so nya wɔn akatua;
na ampa ara Onyankopɔn bi wɔ hɔ a ɔbu ewiase atɛn.”
ASCB : Nnwom 58